Chikafu cheGerman nechinwiwa chinodaidza chikafu cheGerman
Mune kosi iyi yakanzi chikafu cheGerman uye zvinwiwa, isu tinokupa iwe mazita echiGerman echikafu uye echiGerman mazita ezvinwiwa nemaonero makuru. Mushure mekudzidza mazita ezvekudya nezvinwiwa muchiGerman, tichaita mitsara nezve chikafu uye zvinwiwa muchiGerman ichi chatakadzidza.
Nezve musoro wenyaya weGerman chikafu uye zvinwiwa, ngatitange taratidza kuti kune mazana emhando dzechikafu nemazana emhando dzezvinwiwa mune chikafu cheGerman.Zvechokwadi, hazvigoneke kuverenga zvese izvo zvekudya nezvinwiwa muchidzidzo chino.
Izvo hazvigoneke uye zvakafanira kune shamwari idzo dziri kutodzidza chiGerman kudzidza ese marudzi ese ezvikafu nekumwa kamwechete. Neichi chikonzero, zvakaringana kudzidza zvakajairika uye zvinowanzo sangana nazvo zvekudya uye zvinwiwa mazita muchiGerman pakutanga. Gare gare, apo iwe paunenge uchizvivandudza pachedu, unogona kudzidza chitsva chechiGerman chikafu uye chinwiwa mazwi.
Ngatione chikafu cheGerman uye zvinwiwa mumwe nemumwe. Isu tinopa iyo mifananidzo iyo isu takagadzirira nokungwarira kune yako almancax vashanyi.
GERMAN FOOD NEZVINHU ZVINOFANIRA NYAYA
Chikafu cheGerman uye zvinwiwa - kufa Olive - Olive
Chikafu cheGerman uye zvinwiwa - der Käse - Cheese
Chikafu cheGerman uye zvinwiwa - kufa Margarine - Margarine
Chikafu cheGerman uye zvinwiwa - der Honig - Honey
Chikafu cheGerman uye zvinwiwa - das Spiegele - Mazai Akabikwa
Chikafu cheGerman uye Zvinwiwa - kufa Wurst - Sausage
Chikafu cheGerman uye Zvinwiwa - das Ei - Zai (Raw)
Chikafu cheGerman uye Zvinwiwa - das Brot - Chingwa
Chikafu cheGerman uye zvinwiwa - das Sandwich - Sandwich
Chikafu cheGerman uye zvinwiwa - der Hamburger - Hamburger
Chikafu cheGerman uye zvinwiwa - kufa Suppe - Soup
Chikafu cheGerman uye zvinwiwa - der Fisch - Hove
Chikafu cheGerman uye zvinwiwa - das Hähnchen - huku (Yakagadzirwa)
Chikafu cheGerman uye chinwiwa - das Fleisch - Nyama
Chikafu cheGerman uye chinwiwa - kufa Nudel - Pasita
Chikafu cheGerman uye zvinwiwa - kufa Spaghetti - Spaghetti
Chikafu cheGerman uye zvinwiwa - das Ketchup - Ketchup
Chikafu cheGerman uye chinwiwa - kufa Mayonnaise - Mayonnaise
Chikafu cheGerman uye chinwiwa - der joghurt - yogati
Chikafu cheGerman uye chinwiwa - das Salz - Munyu
Chikafu cheGerman uye zvinwiwa - der Zucker - Candy
Zvinwiwa zveGerman - das Wasser - Mvura
Zvinwiwa zveGerman - kufa Mukaka - Mukaka
Zvinwiwa zveGerman - die Buttermilch - Ayran
Zvinwiwa zveGerman - der Tee - Tea
Zvinwiwa zveGerman - der Kaffee - Kofi
Zvinwiwa zveGerman - der Orangensaft - Orange muto
Zvinwiwa zveGerman - kufa Limonade - Lemonade
Shamwari dzinodiwa, takaona mazita eGerman echikafu uye ekunwa kumusoro. Izvo zvakaringana kudzidza akawanda eGerman chikafu uye chinwiwa mazita munzvimbo yekutanga. Iwe unogona ipapo kushandisa nguva kudzidza mazwi matsva paunowana nguva.
Iye zvino ngatishandisei izvi zvekuGerman zvekudya uye zvinwiwa zvatakadzidza mumitsara. Ngatigadzirei mitsara mitsara nezve chikafu uye zvinwiwa muchiGerman.
Semuenzaniso, chii chatinogona kutaura? Ngatitangei nemitsara sekuti ndinoda pasita, handidi hove, ndinoda remonade, ndinoda kunwa tii.
Tichaisawo zvirevo zvemuenzaniso nezvechikafu nezvinwiwa muchiGerman nerutsigiro rwekuona.
SAMPLE SENTENCES Nezve GERMAN FOOD NEZVINHU
ich mag Fisch : Ndinoda hove
ich mag Fisch nicht : Handidi hove
Ich mag : Ndinoda yogati
Ich mag : Handidi yogati
Yakavanzika Mag Nudel : Anofarira pasita
Yakavanzika mag Nudel nicht : Haadi pasta
Hamza ma Limonade : Hamza anoda ndimu
Hamza mag Limonade nicht : Hamza haadi lemonade
Wir mögen Suppe : Tinoda muto
Wir mögen Suppe nicht : Hatidi muto
Zvino ngatidzidze kuita mitsara mirefu senge "Ini ndinoda muto asi ini handidi hamburger". Zvino chiongorora chirevo chatichanyora pazasi, isu tinofunga iwe uchanzwisisa chimiro chemutsara zvirinani nenzira yekupenda.
Omar mag hove, asi er mag hampurilainen kwete
Omar hove sever, asi o hampurilainen haadi
Kana tikaongorora chirevo chiri pamusoro; Ömer ndiyo nyaya yemutsara, uye mag chiito chinoreva kusangana kwechiito mögen zvinoenderana nenyaya yemutongo, kureva kuti, wechitatu munhu mumwechete. Izwi fisch rinoreva hove, izwi aber rinoreva asi-chete, er rinoreva munhu wechitatu mumwechete o, izwi hamburger rinoreva hamburger sekuziva kwaunoita iwe, uye izwi nicht panoperera chirevo rinoshandiswa kuita kuti mutongo uve wakaipa.
Ngatiitei mitsara yakafanana zvakare. Tarisa uone iyo mifananidzo uye mharidzo mitsara yatakagadzirira zvakanyatso kune almancax vashanyi pazasi.
Zeynep mag muto, asi sie mag Kushama kwete
Zeynep muto sever asi o pasta haadi
Ibrahim mag Joghurt, asi er mag Mayonnaise kwete
Ibrahim yoghurt sever asi o mayonnaise haadi
Melis mag mandimu, asi sie mag kofi kwete
Melis mandimu sever asi o kofi haadi
Tinogona kupa mitsara iri pamusoro semuenzaniso kune zvirevo zvakaita sekuti "Ndinoda muto asi handidi pasta" maererano nechikafu nezvinwiwa zveGerman. Zvino ngatitarisei kune imwe mhando yemutsara iyo yatinogona kupa semuenzaniso nezve chikafu nezvinwiwa muchiGerman: Ohne uye ngano zvirevo.
Semuenzaniso wemitsara yechiGerman yakaitwa uchishandisa Ohne uye zvirevo zvekubatanidza "Ndinonwa tii isina shuga","Ndinodya pizza isina madomasi","Ndinonwa kofi nemukakaTinogona kupa mitsara se ”semuenzaniso.
Iye zvino ngatigadzirei mitsara nezve chikafu nekumwa muchiGerman tichishandisa zvirevo zvinonzi "ohne" uye "ngano".
GERMAN FOOD uye DZIDZIDZO DZEMAHARA
Ngatitarisei zvino pamatanho akasiyana tichishandisa zvirevo zve ohne nengano. Nhaurirano dzedu dzinove nemubvunzo nemhinduro. MuchiGerman, mubatanidzwa ohne unoreva -li, uye mubatanidzwa pamwe nengano zvinoreva -li-na. Semuenzaniso, kana ndichiti ndinonwa tii isina shuga, chibatanidzo ohne chinoshandiswa, uye pandinoti tii neshuga, mubatanidzwa wengano unoshandiswa. Izvi zvinonzwisiswa zvirinani mumienzaniso pazasi. Wongorora zvirevo zvakagadzirwa neGerman ohne uye ngano.
ohne - mitsara yengano
Ngationgororei mufananidzo uri pamusoro:
Wie trinkst du deinen Tee? : Unonwa sei tii yako?
Ich trinke Tee ohne Zucker. : Ndinonwa tii isina shuga.
Chii chinonzi Pizza? : Unodya sei pizza?
Ich esse Pizza ohne Mayonnaise. : Ini ndinodya pizza ndisina mayonnaise.
Chii chinonzi Hamburger? : Unodya sei hamburger?
Ndizvo zvakaita Hamburger neKetchup. : Ini ndinodya hamburger ne ketchup.
Shamwari dzinodiwa, muchidzidzo chino, takaona mitsara yemitsara yatinogona kugadzira pamusoro pechikafu cheGerman, zvinwiwa zveGerman uye chikafu nechinwiwa cheGerman.
10th grade german chikafu chinwiwa chinwiwa9th giredhi eGerman zvinwiwa9th giredhi chikafu cheGerman9th grade german chikafu chinwiwa chinwiwagerman essen und trinkenMazita echinwiwa echiGermanZvinwiwa zveGermanGerman breakfast breakfastGerman dishChikafu cheGerman uye chinwiwa dialoguesZvokudya zveGermany newaini mazitaGerman Food